तपाईंको आजको दिन,भाग्य कस्तो रहनेछ्? हेर्नुहोस आजको राशिफल। - Malayakhabar
होम पेज आजको राशिफल तपाईंको आजको दिन,भाग्य कस्तो रहनेछ्? हेर्नुहोस आजको राशिफल।
वि.सं.२०७८ साल असार २८ गते । सोमबार । ईश्वी सन् २०२१ जुलाई १२ तारिख । नेपाल संवत् ११४१ । राक्षस संवत्सर । उत्तरायण । ग्रीष्म ऋतु । श्रीशाके १९४२ । आषाढ शुक्ल पक्ष । तिथि– द्वितीया,बिहान ०७ बजेर १३ मिनेट उप्रान्त तृतीया । नक्षत्र– अष्लेषा, रातको ०२ बजेर ५५ मिनेट उप्रान्त मघा । काठमाडौंमा सूर्योदय बिहान ०५ बजेर १७ मिनेट, सूर्यास्त बेलुकी ०७ बजेर ०० मिनेट । दिनमान ३४ घडी १७ पला । जगन्नाथ रथयात्रा ।
मेष राशि : व्यावसायमा नाँफा कमाउन निकै नै संघर्ष गर्नुपर्नेछ । सवारी साधन तथा घर जग्गाको कारोबारबाट केहि मात्रमा लाभ लिन सकिनेछ। बिद्या तथा प्रतिस्पर्धामा सफलता पाउन बढी नै मिहिनेत गर्नुपर्नेछ। आमा तथा आमा सरहका मानिससँग मनमुटाब बढ्नेछ । सामान्य स्वास्थ्य सम्बन्धि सम’स्याले पि’रोल्नेछ । राजनीति तथा समाज सेवामा जनताको खासै समर्थन प्राप्त हुनेछैन । तरपनि कृषि तथा पशुपालन व्यावसाय फस्टाएर जानेछ ।
बृष राशि : मु’द्दा मामिला तथा अदालतबाट हुने फैसला तपार्ईँकै पक्षमा आउनेछन् भने प्रतिस्पर्धी हरुलार्ई परास्त गर्दै अगाडी बढ्न सकिने छ । छोटो दुरिको व्यावसायिक यात्राको तय हुनेछ भने यात्राबाट भनेजस्तो उपलव्धी हासिल हुनेछ । बिद्यार्थी वर्गहरुले पढाइमा मिहिनेत गरी राम्रो नतिजा ल्याउन सक्नेछन् । पारिवारिक माहोलमा दिन बित्ने तथा मिष्ठान्न भोजन ग्रहण गर्ने अवसर जुर्नेछ । भाग्यले साथ दिने हुँदा कामहरु समयमा बन्नेछन् ।
मिथुन राशि : बोलिको प्रभाव बढ्ने हुनाले महत्वपूर्ण निर्णयहरु आजको दिन गर्नु उपयुक्त हुनेछ । पारिवारिक जमघटमा दिन बित्ने तथा मिष्ठान्न भोजन ग्रहण गर्ने अवसर प्राप्त हुनेछ । पति पत्नी तथा माया प्रे’ममा सा’मिप्यता बढेर जानेछ । कुटुम्बबाट तपार्ईँले गरेको काममा सहयोग प्राप्त हुनेछ । पढाइ लेखाइमा सफलता हात लाग्ने योग रहेकोछ । व्यापार व्यावसायबाट प्रशस्त नाँफा कमाउन सकिनेछ ।
कर्कट राशि : राजनीति तथा समाजसेवामा जनताको गतिलो समर्थन पाइने हुँदा नाम कमाउन तथा पद प्राप्तीको योग रहेकोछ । बिभिन्न वि’लाशी वस्तुको प्रयोग गरी मनग्गे आम्दानी हुनेछ। आर्थिक रुपमा सम्पन्न हुने चालिएका कदमहरुबाट भनेजस्तो नतिजा आउने हुनाले मन प्रफुल्लित हुनेछ । माया प्रे’ममा एक अर्कालाई विश्वास गर्ने वाताबरण बन्नेछ । पढाइ लेखाइमा मनजाने हुनाले नतिजा आफैतिर ल्याउन सकिनेछ ।
सिंह राशि : समयको सहि सदुपयोग गरी विदेशि लगानीहरु ल्याई रोजगारका अवसरहरु बढाउन सकिनेछ । कर्म प्राप्तिको लागि लामो दुरिको विदेश यात्रा हुने सम्भावनालाई नकार्न सकिदैन । व्यावसायबाट भनेजस्तो आम्दानी नहुने हुदा थप काम गर्न जागर हराएर जानेछ । घरमा आफन्त विचनै मनमुटाव बढ्ने योग रहेकोछ भने माया प्रे’ममा धो’का हुन सक्छ सचेत रहनुहोला ।
कन्या राशि : साथिभाई तथा नातागोताबाट सहयोग पाइने हुनाले हरेक क्षेत्रमा अगाडी बढ्न सकिनेछ । भौतिक सम्पत्ती तथा सवारी साधन जोड्न सकिनेछ। माया प्रे’ममा आ’त्मियता बढ्नेछ भने पति पत्नी बीच मायाको डोरो क’सिलो भएर जानेछ । पै’त्रिक धन तथा सरकारी सम्पत्ती प्रयोग गरी आम्दानीका स्रोतहरु बढाउन सकिनेछ । बिद्या तथा प्रतिस्पर्धामा प्रतिस्पर्धीहरुलार्ई किनारा लगाउदै नतिजा आफैतिर ल्याउन सकिनेछ ।
तुला राशि : नयाँ काम पाउने तथा नोकरिमा बढोत्तरी हुने योग रहेकोछ । व्यापार व्यावसाय फस्टाएर जानेछ भने उद्योगमा लगानी गरी रोजगारिका अवसरहरु सिर्जना गर्न सकिने छ । बुवा बुवा सरहका मानिसबाट तपार्ईँको काममा सहयोग हुनाले अन्य काम गर्न सहज हुनेछ । सरकारी तथा प्रशासनिक क्षेत्रमा तपार्ईँको ब’र्चस्व कायम रहनेछ भने माया प्रे’ममा एक अर्कालाई बिश्वास गर्दै अगाडी बढ्न सकिनेछ ।
बृश्चिक राशि : परिवार तथा आफन्त जनसँग मन मु’टाव बढ्नेछ । पति प’त्नी तथा माया प्रे’ममा अ’विस्वास सिर्जना हुने छ । सवारी साधन तथा यात्रा गर्दा विषेश ध्यान दिनु होला दुर्घ’टना तथा अ’प्रिय घ’टना घ’ट्न सक्छ । बिद्या तथा प्रतिस्पर्धामा सफलता पाउन निकैनै मिहिनेत गर्नुपर्नेछ । स्वास्थ्य सम्वन्धी सम’स्याले सताउनेछ भने आफन्त तथा विस्वास गरेकै हरुबाट धोका हुनेछ ।
धनु राशि : व्यापार व्यावसायमा नाँफा कमाउन बढि नै संघर्ष गर्नुपर्ने छ । कामका सवालमा उठ्ने गो’प्य कुराहरु बाहीर आउन सक्ने हुनाले सजक रहनु पर्ने छ । श्वासप्रश्वास तथा छाती सम्वन्धी सम’स्याले सताउने हुँदा काम गर्न अप्ठ्यारो महशुस हुनेछ । दिदी बहिनीसँग मनमुटाव बढ्ने योग रहेकोछ । सवारी साधन तथा भौतिक सम्पतिको प्रयोग तथा परिचालन गर्दा ध्यान दिनुहोला, दिन मध्ययम रहेकोछ ।
मकर राशि : छोटो दुरिको व्यावसायिक यात्रा हुनेछ भने व्यापार व्यावसाय फस्टाएर जाने हुनाले आर्थिक रुपमा सम्पन्न हुने योग रहेकोछ । माया प्रे’ममा नजिक हुने समय रहेकोछ भने जीवन साथिको सहयोग पाइने छ। अध्ययनमा बिद्यार्थी हरुले चाहे जस्तो नतिजा हात पार्न सक्नेछन् । वि’लाशि वस्तुको प्रयोग मार्फत अरुको मन तान्न सकिनेछ । प्रिजजन भेट हुनेछ भने आथित्यपूर्ण सम्मान पाइने योग रहेकोछ ।
कुम्भ राशि : स’त्रु तथा प्रतिस्पर्धीहरु आईलाग्ने भए पनि अन्तत तपार्ईँको क्षमता देखेर आफै साईड लाग्ने छन् । स्वास्थ्य सम्वन्धी पुराना स’मस्याहरु ठिक हुँदै जाने तथा काम गर्न सहज वातावरण बन्ने छ । पढाइ लेखाइमा प्रतिस्पर्धीहरुलार्ई किनारा लगाउदै अगाडी बढ्ने समय रहेकोछ । पुराना ऋ’णहरु सकाउदै नयाँ कामको थालनी गर्न सकिनेछ । नोकरिमा प्रवेशको सम्भावनालाई नकार्न सकिने अवस्था छैन । प्रे’म प्रशङगमा एक अर्का बीच नजिक हुने तथा रमाउन सकिनेछ ।
मीन राशि : पढाइ लेखाइमा प्रशस्त समय दिएपनि न्यून उपलव्धिमा चित्त बुझाउनु पर्ने अवस्था रहने छ । सामाजिक काम गर्ने अवसर आएपनि जस नपाउदा मन खिन्न हुने छ । आफन्त तथा सन्तान पक्षले अनाबश्यक झ’न्झट दिनेछन् भने माया प्रे’ममा आफ्नो मा’यालुलाई बिश्वासमा लिन बढिनै समय खर्चिनु पर्नेछ । व्यापारमा सोचोजस्तो प्रतिफल प्राप्त नहुन सक्छ । स्वास्थ्यमा सामान्य समस्या आई दैनिक कामहरु प्रभावित हुनेछन् ध्यान दिनुहोला ।
तपाईँको दिन शुभ रहोस् । यूवा ज्योतिषी डिपी भण्डारी
अघिल्लो लेख इटालीका गोलरक्षक डोनारुम्मा युरोकपको सर्वोत्कृष्ट खेलाडी घोषित।
पछिल्लो लेख इथियोपियामा प्रधानमन्त्री पदमा अबी अहमद भारी बहुमतका साथ विजयी।